Etu ị ga - esi hazie Saleslọ Ọrụ Ntanetị Dị Mfe 5 | Martech Zone
Etu ị ga - esi hazie ọrụ ịre ahịa dị mfe ọnlaịnụ 5
N'ime ọnwa ole na ole gara aga, ọtụtụ azụmaahịa gbanwere n'ịzụ ahịa n'ịntanetị n'ihi COVID-19. Nke a hapụrụ ọtụtụ ụlọ ọrụ na obere ụlọ ọrụ na-enyo enyo iji wepụta atụmatụ dị ire ahịa dijitalụ, ọkachasị ụlọ ọrụ ndị ahụ dabere na ahịa site na ụlọ ahịa brik na-mortar.
Ọ bụ ezie na ụlọ oriri na ọ restaurantsụ ,ụ, ụlọ ahịa na-ere ahịa, na ọtụtụ ndị ọzọ na-amalite imeghe ọzọ, ihe mmụta a mụtara n'ime ọtụtụ ọnwa gara aga doro anya - ịre ahịa n'ịntanetị ga-abụrịrị akụkụ nke atụmatụ azụmahịa gị niile.
Maka ụfọdụ, nke a nwere ike ịtụ ụjọ n'ihi na ịre ahịa n'ịntanetị bụ atụmatụ ọhụrụ. O yiri ka enwere ọtụtụ ngwaọrụ, ọwa, na nyiwe mmadụ nwere ike ịkọ.
Maka igwe mmadụ a, a ga m asị gị echegbula - ịre ahịa n'ịntanetị abụghị ihe mgbagwoju anya dịka ọ dị.
N'ezie, enwere naanị usoro ise dị mkpa ịkwesịrị iji bido na azụmaahịa gị n'ịntanetị ma mee ka ọ rụọ ọrụ maka gị.
Ihe Nzọụkwụ 5
Nka a otu-liner
Wireframe gị na ebe nrụọrụ weebụ
Mepụta igwe na-enye ndu
Mepụta usoro ahịa email
Mepụta usoro nlezianya ịzụlite
Ihe ise a bu usoro ahia Donald Miller na Dr. JJ Peterson dere na akwukwo a Ahịa Dị Mfe. Ha niile na-etolite ihe anyị na-akpọkarị olulu ahịa / ahịa.
Ọ bụ ezie na ị nwere ike nweta nkọwa zuru ezu banyere usoro ọ bụla na akwụkwọ a, naanị m ga-eme ka usoro ọ bụla pụta ìhè, kọwaa ihe kpatara ịchọrọ usoro a na ntanetị n'ịntanetị, wee nye gị ihe ị ga-arụ nke ị ga-eme ozugbo .
Njikere ịwụnye ahịa gị n'ịntanetị? Ka anyị banye n'ime.
Kwụpụ 1: Otu-Liner
Otu ihe ị na - eme bụ ahịrịokwu 2-3 dị mfe nke na - akọwa nsogbu ị na - enyere ndị ahịa aka idozi, ihe ngwọta gị na nsogbu ahụ (yabụ ngwaahịa / ọrụ gị), yana nsonaazụ ndị ahịa nwere ike ịtụ anya mgbe gị na gị zụsịrị ahịa.
Ihe mere anyị ji ebido otu ihe bụ maka ọtụtụ ihe ọ na-eme. You nwere ike itinye ihe ntinye gị na mbinye aka email gị, kaadị azụmaahịa, akụ akụ ziri ezi, weebụsaịtị, yana ọtụtụ akụ ndị ọzọ. Ọ bụghị naanị na akụ azụmaahịa gị n'ịntanetị.
Nzube nke otu-liner dị mfe - pique mmasị gị ika - na nke ahụ mere site na-amalite na nsogbu ị na-edozi ndị ahịa. Naanị ma ọ bụrụ na ịnwere ike ịkụnye mmasị onye ahịa gị nwere na ika gị, mgbe ahụ ha ga-aga n'akụkụ ọzọ nke olulu ahụ. Ya mere, bụrụ onye ahịa ị na-ahụ maka ihe ị na-eme!
Nzọụkwụ Nzọụkwụ - Kere otu ụzọ gị site n’ikwu nsogbu ndị ahịa gị chere ihu, yana azịza ị na-enye, yana nsonaazụ ndị ahịa gị nwere ike ịtụ anya mgbe gị na gị mechara zụọ ahịa.
Nzọụkwụ 2: Wireframe Gị weebụsaịtị
Nzo ozo nke nkpu ahia gi bu imeputa ma mepee weebụsaịtị nke na aru oru. Amaara m na nke ahụ na-ada ntakịrị egwu mana ị nwere ike ị na-achụpụ ebe nrụọrụ weebụ gị na ụlọ ọrụ ma ọ bụrụ na ịnweghị maka ya.
Ebe nrụọrụ weebụ gị kwesịrị ịdị mfe ma doo anya dị ka o kwere mee ma ọ pụtara ịbụ ngwá ọrụ ahịa. Ọtụtụ ndị nwe ụlọ ahịa na-ele weebụsaịtị ha anya dị ka ihe ngosi mgbe ha kwesịrị iwepụta ego maka gị. Obere njikọ ahụ ka mma, ọzọkwa, ị na-ekwukarị banyere nsogbu ndị ahịa gị na-eche ihu na ngwọta gị, nke ka mma.
Ihe kpatara anyị ji tinye webusaiti na olulu ahịa bụ n'ihi na ọ ga-abụ ebe mbụ ndị mmadụ na-azụ ahịa gị n'ịntanetị. Ozugbo i tinyere mmasị ha na ngwongwo gị, anyị ga-achọ ịnye ndị mmadụ ntakịrị ihe ọmụma ma mee ka ha dị nso na ire ere.
Nzọụkwụ Nzọụkwụ - Mgbe ị na-emepụta weebụsaịtị gị, ọ ga-adị mkpa ka ị chee echiche banyere ịkpọ oku ime ihe (CTA). Nke ahụ bụ ihe ndị ahịa nwere ike ịme iji soro gị zụọ ahịa. Nke a nwere ike ịbụ ihe dị mfe dịka "ịzụta" ma ọ bụ ihe gbagwojuru anya dị ka "nweta atụmatụ". Ihe ọ bụla metụtara azụmahịa gị. Chee echiche site na CTA bụ isi na ọ ga - eme ka usoro ịmebe weebụ gị belata obere nrụgide ozugbo ị ruru ya.
Kwụpụ 3: Mepụta Generator
Nke a bụ ebe anyị ga-esi hụ olulu ahịa ahụ n'ụzọ ọdịnala. Onye na - eduzi gị bụ ngwa nwere ike ibudata na ndị ahịa nwere ike ịnata n'ọnọdụ adreesị ozi-e ha. Ekwenyesiri m ike na ị hụla ọtụtụ ihe atụ na ịntanetị.
Ọ na-amasị m ịmepụta PDF dị mfe ma ọ bụ obere vidiyo nke ndị ahịa nwere ike ịnata ma ọ bụrụ na ha nye m adreesị ozi-e ha. Ideasfọdụ echiche maka onye na-eduzi ihe nwere ike ịbụ mkparịta ụka na ọkachamara ụlọ ọrụ, ndepụta nyocha, ma ọ bụ otu esi-vidiyo. Ọ dabere kpamkpam na gị na ihe ị chere ga-enye ndị na-ege gị ntị uru.
Ebumnuche nke onye na-eduzi ndu bụ inweta ozi kọntaktị nke onye ahịa nwere. O yikarịrị ka ọ bụrụ na mmadụ ebudata onye na-eduzi gị, ha bụ atụmanya na-ekpo ọkụ ma nwee ike nwee mmasị na ngwaahịa / ọrụ gị. Gbanwe adreesị ozi-e maka onye na-enye gị ọkụ bụ otu nzọụkwụ ọzọ na olulu ahịa yana otu nzọ dị nso na ịzụta.
Nzọụkwụ Nzọụkwụ - Brainstorm otu ọdịnaya nke ga-aba uru nye ndị na-ege gị ntị na nke ahụ ga-arata ha inye gị adreesị ozi-e ha. Okwesighi ka o sie ike, mana okwesiri ka odi nkpa ma baa uru nye ndi ichoro ire.
Nzọụkwụ 4: Mepụta Usoro Email Ahịa
Ugbu a, anyị abanyela na akụkụ akpaaka nke olulu ahịa anyị. Usoro ahịa email gị bụ ozi-e 5-7 bụ nke a na-ezigara onye ahịa gị nwere ike ozugbo ha budatara onye na-eduzi gị. Enwere ike izipu ndị a ụbọchị ole na ole iche ma ọ bụ izu ole na ole iche dabere na ụdị ụlọ ọrụ gị.
E-mail izizi gị kwesiri ilekwasị anya n'inweta onye na - ebu ndu nke ị kwere nkwa na ọnweghị ihe ọzọ - mee ka ọ dị mfe. Mgbe ahụ ị kwesịrị ịnwe ọtụtụ ozi ịntanetị na-esote na usoro gị na-elekwasị anya na akaebe na imeri nkwenye zuru oke ịzụta ngwaahịa / ọrụ gị. Email ikpeazụ dị na usoro ahịa kwesịrị ịbụ email na-ere ozugbo. Emela ihere - ọ bụrụ na mmadụ ebudatara igwe na-eduzi gị, ha chọrọ ihe ị nwere. Ha chọrọ naanị nkwenye dị ntakịrị.
Ọ bụ n'oge a ka anyị na-amalite ịhụ ndị ahịa nwere ike ịbụ ndị ahịa n'ezie. Ihe kpatara na anyi nwere usoro ahia ndi akpaka bu ka you ghara ichu oku na-anwa ire ere mgbe niile n'inwe olile anya gi - inwere ike itinye ihe a nile na autopilot Na ebumnuche nke usoro ahịa gị bụ nkọwa nke onwe - mechie azụmahịa ahụ!
Nzọụkwụ Nzọụkwụ - Chee echiche banyere ozi ịntanetị 5-7 ịchọrọ na usoro ahịa gị (gụnyere ịnyefe onye na-eduzi ihe nchịkwa, akaebe, imeri mmegide, na ozi ịre ahịa ozugbo) wee dee ha. Ha ekwesighi ịdị ogologo ma ọ bụ gbagwojuru anya - n’eziokwu, ọ ga-akawanye mfe. Otú ọ dị, iwu ọlaedo bụ na ha ga-adị mkpa ma na-adọrọ mmasị.
Nzọụkwụ 5: Mepụta Usoro Ntinye Email
Usoro ịzụlite email gị bụ ebe ọ bụla sitere na ozi-e 6-52 dabere na ebumnuche gị na gung-ho ị bụ ahịa email. A na-ezipụ ozi ịntanetị ndị a kwa izu ma nwee ike ịbụ ihe ọ bụla site na ndụmọdụ, akụkọ ụlọ ọrụ / ụlọ ọrụ, otu esi eme, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ ị chere ga-aba uru nye ndị na-ege gị ntị.
Ihe kpatara na anyị nwere usoro nurture bụ maka na ọbụlagodi mgbe ibudatara onye na-eduzi gị ma na-agafe usoro ahịa gị, ụfọdụ ndị ahịa nwere ike ọ gaghị adị njikere ịzụta. Nke ahụ dị mma. Agbanyeghị, anyị achọghị ịhapụ ndị ahịa a. Yabụ, ị na-ezigara ha ozi ịntanetị na-echetara ha na ngwaahịa / ọrụ gị bụ ihe ngwọta nye nsogbu ha.
Ọ dị mma ma ọ bụrụ na ndị mmadụ anaghị agụ ma ọ bụ mepee email gị. Usoro a ka bara uru n'ihi na aha akara gị na-apụta na igbe ozi email ha, nke na-abụkarị na ngwaọrụ mkpanaka ha. Yabụ, na-echetara gị mgbe niile na ụlọ ọrụ gị dị.
Ozugbo ndị ahịa nwere ike ịgafe usoro nurturing a ị nwere ike idowe ha na usoro nurturt ọzọ ma ọ bụ bufee ha na usoro ahịa ọzọ. Gbaa mbọ hụ na ịgaghị efunahụ onye ọ bụla n'ime ụlọ ọrụ gị na azụmaahịa gị.
Nzọụkwụ Nzọụkwụ - Kpebisie ike na isiokwu gị ịzụlite email usoro. You ga-ezipụ ndụmọdụ metụtara ụlọ ọrụ gị? Kedu ka-esi eme? Akụkọ ụlọ ọrụ? Ma ọ bụ ikekwe ihe ọzọ. I kpebiri.
E nwere ya! Ngwurugwu uzo ise di mfe nke ị nwere ike mejuputa onwe gi ma obu ndi otu gi.
Ọ bụrụ na ịgbanye na ntanetị n'ịntanetị abụwo ihe ịma aka, nyezie usoro a dị mfe. M na-ekwe nkwa na ị ga-ahụ nsonaazụ dị mma karịa ịnweghị usoro ịntanetị.
Ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịmụtakwu banyere ụlọ ọrụ nke mepụtara usoro nnabata a, lelee AkụkọBrand.com. Ha nwekwara ulo akwukwo na ogbako nke onwe iji kụziere gị na ndị otu gị ihe dị mfe ha.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ inwe oghere ire ere maka azụmahịa gị na-eso ụkpụrụ StoryBrand, wee gakwuru ndị otu anyị Bolọ ọrụ Boon.
Kpọtụrụ gị na Boon
Nke a bụ ụlọ ahịa gị na uto azụmaahịa gị.
Tags: ụlọ ọrụ boonDonald milleremail usorommmmmmmmmmmmndu igwendu igweire ahia di mfeịzụlite usoro emailotu-linerahịa email usoroụlọ nkwonkwo ahịaakụkọ,waya
Ryan Crozier bụ onye guzobere Bolọ ọrụ Boon, ụlọ ọrụ na-ere ahịa dijitalụ lekwasịrị anya n'inyere ndị mmadụ aka ime ihe dị mma n'ịntanetị. Ọ nwere afọ 15 + nke ahụmịhe ahịa ma nyere ọtụtụ ụlọ ọrụ aka itinye usoro StoryBrand n'ahịa ha.
Na ịgbatị Digital Reach na Mobile-mbụ, Post-Kuki World
Ingghọta Adreesị Parsing, Nhazi, na nnyefe APIs